Inkqubela phambili ye-BIM-Isishwankathelo seNkomfa yoNyaka -iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2017 Zobunjineli, ezintsha, Microstation-Bentley, Topography
Inkqubela yokumgangatho weZakhiwo zoLwazi lweZakhiwo (BIM) yimixholo eguqukayo INkomfa yeZiseko zoPhuhliso, ebibanjwe nge-Okthobha eSingapore. Nangona iakhawunti yam ye-Twitter yayixhwilwe nge-hashtag # YII2017 ngezo ntsuku, nantsi isishwankathelo.
Ngeli xesha ndimele ndihambe eNicaragua, ilizwe apho ndigqibe khona ukuhlala kwiminyaka ezayo. Akukho nto ngaphantsi kweeyure ze-24 emoyeni; i-Managua, iSan Salvador, eLos Angeles, iTaipei, eSingapore, eyongezelela utshintsho lweeshedyuli ngokujikeleza kwehlabathi, kuthetha ukushiya ngoLwesihlanu kwaye ufike ngeCawa ngemini. Ngoko ndibe nexesha elininzi lokulala, yinto enhle kwi-flight apho izinto ezibonakalayo kuphela zi-movie kunye nendawo ye-mono ye-intanethi ubuncinci kwicandelo le-China Airlines.
ISingapore ibe lukhetho olungenakubethwa kwiNkomfa, ngaphandle kokubanjwa eMarina Sands. Ilizwe ngumzekelo oncomekayo ukuba uyahamba ngenjongo yokubuza, utshintshise kwaye ufunde ukuba uhlanga lwabantu abazizigidi ezi-6 lunokuphumelela njani emva kwenkululeko yalo emva kweminyaka yoo-XNUMX. Kuthatha iiyure ezimbalwa ukuziqhelanisa nohlobo lwabo lwe "Singlish", kwindlela esebenza ngayo inkqubo yezothutho, kwiimoto ezinesondo lokuqhuba ekunene kwaye imvakalelo ebangelwa yindlela abazenza ngayo izinto ukusuka kubulula bokwenza iRegistry yokuthengiswa kwezindlu kunye nomzekelo wabo omangalisayo. cadastral enamacala amathathu.
Ukuhamba ngezitrato kwandenza ndikhumbule iiprojekthi endizibonayo kuphela kwiingqungquthela kwezinye iinkomfa, ezifana nebhuloho ngendlela yesakhiwo seDNA, uyilo lobunqamlezo lweendonga zeMarina okanye umbono wokuzinza kwendawo yokuhlala kwidolophu.
Ndandikhumbula kakhulu ukubona oogxa ngakumbi umxholo kokufika, kuba eli xesha ibe yimfuneko ukuba kunikwe ingqwalasela eendaba phantsi kumxholo iiprojekthi ezingenisiweyo, ngaphandle koko, inene, yenza ajenda hambo akusoloko ukufumaneka inshorensi lithetha baba indwendwe Baye mandla eendaba ezininzi zivela empumalanga, ukuba emva kweminyaka 6 inkomfa phakathi Netherlands ne United Kingdom kufuneka ukuba zibekwe phambili. Kodwa thina iyonke 130 iintatheli, amazwe 28, iilwimi 10 ezahlukeneyo.
Kule nto ininzi endiyithethayo, kodwa ngeenjongo zesishwankathelo, ezi ziindaba eziye zabamba ingqalelo.
Ulwalamano lwePavilion lwenziwa ngokusemthethweni. Le yindlela ekumgangatho ophezulu athe amagama amane amakhulu kwitekhnoloji akhokelele ekumiseleni ngokusesikweni, ngalinye ngokwendima yabo, kwindlela yokumanyanisa yokumangalisa;
Topcon. Njengomnye ummelwane omkhulu onxibelelwano nentsimi yokusebenza. Baye thaca umbono wabo yaye benza imiboniso umdla ukusebenza ukuya mphandle, kunye nezixhobo kukhatshwa ukuya izixhobo umhlaba uyahamba, makhe nina amanxeba nezinto Wawuzalisa ukuba zisalele nongasazifuniyo abahloli kunye Bouncers ebeka ezibondeni, ivelisa imiphezulu okanye ukubala imiqulu. Indlela leyo iye yenziwa Topcon kubalulekile ukuqaphela izinto zazivelela yayo kule minyaka mithathu idlulileyo, ingakumbi xa sikhumbula ukuba lilinge lokuqala wayekunye Trimble, owangenela bucala ukususela kwixesha kwaba engahambelaniyo kunye nomoya walo impiriyali.
SIEMENS. Umbono wakhe wokukhawulezisa ukufakwa kwikhompyuter kwezinto zokwenyani zehlabathi usibonisa ngokusondela kakhulu kwi-Intanethi yezinto (IoT). Usibonisile imeko-bume yento esiyilindeleyo nezixeko ezikrelekrele, inqanaba layo lengqondo kunye neeapps zengqondo; Ulwazi oluxhunyiwe kwi-bhetri yolawulo lomyalelo ukuya kwisikhululo samandla ombane kwisixeko siphela.
Bureau Veritas. Ngaphantsi kwaziwa kakuhle kule meko yasentshona, iVeritas yinkampani egxile kulawulo lolwazi olusemgangathweni. Inezicelo kwimodeli yezinto zobomi bokwenyani, ukusuka kwinkqubo yokusebenza.
Microsoft. Emva kwemizamo engaguquguqukiyo yokuhlala kukhuphiswano lweenkampani ezintsha, iMicrosoft ifezekisile injongo elungileyo nenethiwekhi yayo yeAzure, esetyenziswa ziinkampani ezingekho ngaphantsi kwe-90% yeenkampani ezikhethwe kuluhlu lweFortune 500. IMicrosoft, ngokuchaseneyo Kwinto endiqhula ngayo ngo-2010, kule meko idlala indima yokuba ngumjelo apho idatha ihamba khona, apho emva kokuphelelwa lixesha kwempumelelo yayo (iMicrosoft, Windows, iSQL Server) kunye nokuzama njengeshishini 2.0, iceba ukuthatha ithuba. kunye namakhulu ezicelo zewebhu onazo, kodwa akukho mntu waziyo ngazo.
Bentley Systems. Kakade, umgqugquzeli walo mbambano nguBentley, ophikisana nomoya wokuchasana nokutshintshwa kweenkampani ezidibeneyo, uye wasimangalisa. Akunakwenzeka ukuthintela ukwamkelwa kwexesha elidlulileyo, ekuqwalaseleni ukuba abaqashi beenkampani badala; Noko ke, njengoko ndithethile, ndamangaliswa. I-Bhupinder ibonise iqela lobuso obutsha kunye nokukwazi kwakhe ukubonakalisa ubunzima obungenakuchukumisa nje kumkhumbuza ngamandla kaGreg, obonakala ehlaziya kunye nenqaku lakhe elikhuthazayo, ongakhange alahlekelwe ixesha elibalulekileyo kunye nokulula kokuthatha imifanekiso kunye nabathathi-nxaxheba, ngubani obabuza ngokoqobo amabinzana abangaze balibale, kuba kubonakala kubonisa inkumbulo enkulu kunye novelwano lwendalo.
Intetho ephilayo eyenziwa nguBhupinder noKeith, malunga nokulungelelaniswa kwenguqu, sele iphumelele. Ngaphandle kokukhula kunye nenkampani yabo, baye bakwazi ukwandisa ilifa esinethemba lokuba liya kuphinda lizaliswe ngezizukulwana ezitsha, ngaphandle kokulahlekelwa yixabiso labo ngenxa yokuba bathatha inxaxheba kwezinye izabelo.
imiboniso zokwalatha izixhaso Alliance inkundla ahlelwa apho Microsoft, Topcon, Veritas, Bentley Institute of amaziko oqeqesho kunye Xtation IX waba amajukujuku ngokwenene umdla kubonakala umva. Ezi evuliwe ngawo onke amaxesha, nangona iiyure ezithile umboniso leyo ndafumanisa ingakumbi igalelo eninzi inxalenye esakhula. I Bentley Institute laye likho kwakudala, kodwa kwiminyaka yakutshanje singene ugxininiso kwi specialising in BIM Academy, nto kulo mzekelo owawubona fronts ezithathu, nangona ezihambelanayo, ngokoluvo lwam kwahlula imigca umsebenzi phakathi I-Bentley kunye ne-Pavilion Alliance:
Isikolo sokwakha iBentley. Lo ngumgca ovuthiweyo ngakumbi, eli likhonkco elidibanisa umzamo weTopcon kunye neBentley.
Isikolo sokumodareyitha okuyinyani. Ngokoluvo lwam iya kuba ngumgaqo wokudibanisa phakathi kweBentley kunye neVeritas.
IBIM yoPhuculo lweSikolo. Oku kukudibana phakathi kweSIEMEN kunye neBentley.
Ixesha liya kuxela ukuba ukucinga kwam kuchanekile.
I-model I-2.0 ehambisana nefu. U-Bentley uqalise i-I-model yakhe kwinkomfa yaseCharlotte, apho wayefuna ukufumana ubuso befayile ye-DGN phantsi komgangatho ohambelana nabasebenzisi abaqhelekileyo abangafunda. Umsi ukhangelekile ukususela ekuqaleni, uqikelele ukuba le nto yindlela yokwenza iifayile kwiifayile ezilula ze-DGN ezineenkcukacha ze-XML ezihleliweyo ezigcina impilo yonke yeprojekthi ukususela kwimodeli yayo ukuya kusebenza kwayo. Ngokuqinisekileyo, oku kuye kwabangela i-Microstation kumsebenzi wayo wokuqala njengomphathi we-CAD, ukuba ube ngumlawuli wezinto, iProjekthiWise ijolise ekulawuleni ukusebenza kunye ne-AssetWise, umjikelezo wobomi. UQHUBELELE udibanise ndawonye, ​​uthatha izicelo kwiinguqulelo ze-hybrid phakathi kwideskithophu nefu.
I-model ye-2.0, kunokuba igcine idatha kwiifayili, igxininise ekugcinweni kwefu, phantsi kweetyunithi zedatha efana neBlockChain. I-model ye-1.0 yayisele igxininise kulo, kodwa kwi-2009 ebenokucinga ngokuthetha ngefu njengento ephambili; Sicinga ukuba yindlela ebalulekileyo yokuhlala phambili kwee-Bentley Systems, ezenziwe nguK Keith kwimbonakalo ebonakalayo. Ngale ndlela kuza i-I-Model Hub, ehamba phambili ukuya kwinqanaba lesithathu le-BIM, apho ulwazi luhlala kwindawo elawulwayo ye-mega.
Ukumodelingisa ngokoqobo, kufutshane kunanini ngaphambili. Kuye kwatshintshana kwizinto eziye zanikwe kwiinkomfa, kwaye igama elilodwa kuphela livakala nge-echo enkulu; Umxholo. UBentley uthenge le sicelo iminyaka emibini eyadlulayo kwinkampani yaseFransi, ngoku ikhutshwe njengemveliso edibeneyo eyenza i-photogrammetry kunye ne-modeling eyenziwa yi-Descartes. Baye basinika umceli-mngeni wokudala zethu iimodeli; abangaphezu kwe-100 abathathi-nxaxheba bawuphumelele ekupheleni kosuku lwesibini, kunye nesicelo sokuba ngamanyathelo amabini kuphela afuna ukuthatha iifoto ezilandelanayo nge-angle engaphezu kwamadigri e-15, kunye neqhosha lokuvelisa umzekelo; Inkonzo yelifu ilawulwa ukwenza konke, ukuze kamva ikwazi ukuboniswa, ijikelezwe, ijikelezwe, ilinganiselwe kwisilinganisi, njengemodeli emithathu, ukusuka kwiifoto ezilula!
Akukho nto abanye abangayenziyo, kodwa ngokukodwa ukuba ulawulo lwe-hybrid lweemifanekiso ezichanekileyo eziqhotyoshelweyo kumzekelo ocacileyo ongathinteki ngumthamo weedatha, kwindlela endingazibona ngayo.
Ngalo Bentley uqinisekisa isizathu sokuba bangaboni i-GIS njengento ebaluleke kakhulu. Ugxininiswe kwi-Geo-ingqineli, baya kwi-IFC imigaqo, leyo, nangona ikude, yindlela ehamba kakuhle kwaye apho zonke iinkampani ezifuna ukusinda ziya kusekwa.
Njengengxenye yesiganeko, izibhengezo eziphefumlelweyo ziye zanikezelwa kwiiklasi zeprojekthi ze-17, apho i-51 sele iphelile ekugqityweni kwe-409. Ndakwazi ukubonela ngokubanzi inkcazelo yabaninzi abagqibeleleyo, apho abantwana beprojekthi ye-photogrammmetry beza kum kulungiswa kwindlela yokuqeqesha, besebenzisa idatha efunyenwe ne-drones; Kulapho ndadibana nomfazi waselizwe laseNicaragua kunye nommandla waseMexico onokuthi, ngokubaluleka kwabo, babonisa ukuchukumisa kwabo baseCaribbean. Kwakhona iphrojekthi yeBrazil yokuvuselela inkqubo yamanzi kwiindawo ezilifa elilondoloziweyo, ndayithanda le projekthi kangangokuba ndandifumene ndiziva xa ndiphumelele kwindawo yokuqala. Kwabanye ndiya kuthetha kwinqaku elithile.
Yiyiphi inxaxheba ukuya kwinkomfa kude kangaka?
Zayizinsuku ezintlanu zokufunda okuninzi, apho kuye kwaba luncedo kundibuza ukuba nditshintshe ngokwam; qhagamshelana nezindlela ezichanekileyo zokunciphisa umsi womsi, njengoko sithetha kumxholo wethu waseSpeyin ukuya kumgangatho ophezulu wokuphefumlela. Ndinexesha elincinci ukwenza konke oku kusebenza ngokutsha, okusixelela kuphela ukuba izinto zihamba njani kwilizwe ezikhokelela kwezobuchwephesha, kwaye zibahlalise imeko engafaniyo kunye neemeko ezininzi, apho iimeko eziphambili kwiinkalo ezininzi ezisisiseko kwaye, ngokukodwa apho kuninzi iteknoloji, oko kuyimfuneko kukuba abo baqhuba iiprojekthi basebenzise izicwangciso ezifanelekileyo zokucwangcisa, isiyalo sokuqala sijolise kwiinkqubo kwaye sizenzeke kwizenzo zabo ezizimeleyo ezi njongo ezilungileyo izicwangciso zikaRhulumente kunye nomthetho.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukukhetha umboneleli wemeyile ezininzi-amava akho
Post Next INgqungquthela Yonyaka Yonyaka ye-Inter-American Cadastre kunye ne-Registry Network NetworkOkulandelayo »